Home Somali News Somaliland: Taliyihii Lagu Toogtay Magaaladda Boorama Oo Dhaawiciisa Loo Qaaday Dalka Jabuuti
Taliyihii Ciidanka qaranka ee aaga galbeedka Somaliland Gaashaanle sare Xasan Caqli, oo dhaawac culusi ka soo gaadhay ka dib markii askari ka tirsan ciidankiisu uu maanta ku toogtay xero ku taalla Boorame, ayaa shalay galab loo qaaday cisbitaal ku yaalla dalka Jabuuti.
Taliyihii ciidanka qaranka ee galbeedka Somaliland waxa magaaladda Boorame ka qaaday diyaarad khaas ah oo loo diray, sida uu warbaahinta u xaqiijiyay badhasaabka Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan IRamaax).
Waxa falkan lagu dhaawacay Taliyahaas isna ku dhintay sarkaal kale oo la odhan Jiray Marxuum-Xidigle Faarax Caraalle.
Ciidanka Qaranka ayaa isla goobtii ku qabtay askariga dilka geystay oo ku xidhan magaaladda Boorame.
Wasiirka Gaashaan-dhiga Axmed Xaaji Cali Caddami ayaa dhambaal tacsi ah u diray qoyskii iyo qaraabadii sarkaalka geeriyooday isla markaana EEBE uga baryay inuu dhaawaca ka kiciyo Taliyihii ciidanka qaranka ee aaga galbeedka Somaliland Gaashaanle sare Xasan Caqli.
Wasiir Cadami waxa kale oo uu nidar ku maray inay sharciga uu mudan doono askariga dilkan geystay.
Dadweynaha Somaliland ayaa aad naqdiyay dilka saraakiisha ciidammada Milatariga oo ku soo badanaya Somaliland labadii sannadood ee la soo dhaafay, taasi oo Taliyeyaasha askartoodu toogteen ka dhigaysa kii afraad ee noocan oo kale ah.
Somaliland: Cabdikariin Xinif iyo Maxamed Daa’uud oo Warbaahintii KULMIYE ee Xilliga Doorashada ka Xullaya Laba Beelood
Wargane Tv: Haddaad aragtaan siyaasi cuqdad ka qaba nin kale waa siyaasi aan han lahayn’ – Maxamed Kaahin